चलचित्र ‘प्रेमलीला’ को ‘वियोगान्त गीत’ युट्यु्बमा सार्वजनिक - Everest Dainik - News from Nepal
चलचित्र ‘प्रेमलीला’ को ‘वियोगान्त गीत’ युट्यु्बमा सार्वजनिक
काठमाडौं, चैत ५ । यही शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘प्रेमलीला’ को वियोगान्त लिरिकल भिडियो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।
‘सबको कहानी उस्तै’ बोलको गीतमा शोभा पाण्डेको स्वर छ भने महेश खड्काको संगीत र डा. कृष्णहरी बरालको शब्द रचना छ । गीतमा फिल्मका चलरअचल दृश्यहरु समावेश गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस चलचित्र 'द म्यान फ्रम काठमाडौं' मा जोसेसँग आनाको यस्तो छ रोमान्स !
नेपाली युवती र एक भारतीय युवकको प्रेमकथामा फिल्म आधारित छ । फिल्ममा अभिनेत्री दीपशिखा खड्काको निर्माण र अभिनय छ । उनको प्रेमीको भूमिकामा भारतीय मोडल अली खान छन् ।
साथै, मौसम खड्काको पनि फिल्ममा लिड रोल छ । यसको कथा दीपशिखा आफैंले लेखेकी हुन् ।
पवन गौतमको छायांकन रहेको यसमा हरि लम्साल, महेश खड्का, नबिन कार्कीको संगीत छ । प्रभाकर शर्मा, सुरज तमु र रेखा शाहको पनि यसमा अभिनय छ ।
फैजल फिल्मसको ब्यानरमा बनेको चलचित्रमा नानीमैयाँ कार्की निर्मातामा छिन् । यो फिल्मले सेन्सर बोर्डबाट पिजी सर्टिफिकेट पाएको छ ।